Caqiidada/Dugsiyada Diinta7aad - 12aad
Qaabka Dib u Furida
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-2:45pm
Lambarka Taleefanka 781-493-7727
Dugsi Katoolik madaxbanaan oo loogu tala galay dumarka da'da yar ee fasalada 7-12, Ursuline Academy wuxuu kobciyaa ixtiraamka, naxariista, aqoon kororsiga, iyo u heelanaanta u adeegida. Ayagoo ku dayanaaya dhaxalka uu ka tagay Saint Angela Merici, ardaydeena waxay ku koraan inay noqdaan haween sharaf leh kuwaasoo u adeeggo bulshooyinkooda ujeedo ahaa iyo jiritaan ahaan.
Waxaan ku nool nahay caqiido, geesinimo, iyo farxad.
Ursuline Academy waxa uu ku yaalaa xarun 28-acre ah oo geedo leh, kuna taala Dedham, MA, wuxuu daqiiqado u jiraa Boston iyo Rte. 128. Manhajka yaga dhammaystiran waxa uu xaqiijinayaa in dhammaan ardaydu ay noqon doonaan qoraa yaal xooggan, hadal jeediyeyaal wax gudbin kara, iyo mufakiriin wax falanqeeya; inta badan koorsooyinka la bixiyo waa heerka sare ama kasii sareysa.
Yoolka qalin jabinta Ursuline Academy waa u diyaar garoowga waxbarashada jaamacada. Ardayda Ursuline waxay bartaan sida loo maareeyo waqtigooda, ula falgalaan macallimiinta, u doodaan nafsadooda, iyo sidii uga faa'ideysan lahaayeen ilaha ay heli karaan. Wada shaqayntaan dhabta ah ee laga samaynaayo diyaar garoowga kuleejka waxaa sidoo kale taageera Waaxda Talo Bixinta ee Dugsiga, taasoo leh waqti cashar lasiiyo heerka fasal kasta oo ay lasocdaan fursadaha qof iyo qofka ah.
Macallimiinta dhiga Ursuline maaha kaliya cashar bixiyaal; waa barbaariyaal, tababarayaal iyo hagayaasha naadiga kuwaasoo ah malgalin lagu baxshay kobaca ardayda oo loo dhisaayo inay noqdaan aqoon yahano da'yar ah iyo haween yaryar. Waxay u taagan yihiin hormarinta shaqsiga oo dhan iyo bixinta waxbarasho isku dheeli tiran oo la siiyo arday kasta.
Ayada oo ay u fududaynayaan deegaan dhiirigalinaya iyo diin, ardayda Ursuline waxay ku soo baxayaan in ay noqdaan haween leh qiyam kuwaas oo bulshadooda kala shaqeeya ujeeddada iyo joogtada. Asaga oo qiyaas ahaantii leh 380 arday, Ursuline waxa uu ku filan yahay in uu la tartamo ardayda, waliba waxay ku qaadanaysaa wax yar in uu barto ayaga.
Goono plaid ah, shaatiga kuleeti leh, sharaabaadyo, jaakadaha daabuurka oo marar la xidho, dookhyada gacmo dheerayaasha
14 Cayaaraha, heerka dugsiyada sare iyo JV; xulashooyinka dugsiga dhexe ayaa diyaar ah
Saddex bandhig ruwaayadood sanadkii; koox fanaaniin ah, heesta cappella, naadiga glee, heesaha chamber ensemble
In ka badan 30 naadi ayaa bixinaya, ay kujiraan Kooxda Hadalka, Model UN, robotics, hal abuurka wax qorista, sayniska cilmiyaysan, green club, golaha ardayda, buuga sanadka, iyo kuwo badan
Lacagta Dugsigu qaado